Undercover – Gold Channel Movies
Apr. 23, 2021 JTBC
9 28 votes
1Season 1 Apr. 23, 2021
Episode 1 Apr. 23, 2021
Episode2Apr. 24, 2021
Episode3Apr. 30, 2021
Episode4May. 01, 2021
Episode6May. 08, 2021
Episode7May. 14, 2021
Episode 8 May. 15, 2021
Episode9May. 21, 2021
Episode 10 May. 22, 2021
Episode 11 May. 28, 2021
Episode 12 May. 29, 2021
Episode 13 Jun. 04, 2021
Episode 14 Jun. 05, 2021
Episode 15 Jun. 11, 2021
Episode 16 Jun. 12, 2021
Han Jung Hyun [Present
Choi Yeon Soo [Present
Han Jung Hyun [Young
Choi Yeon Soo [Young
Im Hyeong Rak
Go Yoon Joo
Yoo Sang Dong
Kwak Moon Heum
Lee Man Ho
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Beyond Evil အစားလာမယ့် Undercoverဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်စုံထောက် ဇာတ်လမ်းလေးကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု အစစ်အမှန်ကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Han Jung Hyun (Ji Jin Hee)နဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအကျင့်ပျက်ခြစားမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ့် ပြည်သူ့ရှေ့နေမလေး Choi Yeon Soo (Kim Hyun Joo) တို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ လူတွေရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ နောက်ခံဇာတ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူ စစ်မှန်တဲ့အာဏာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ထင်ထင်ရှားရှား မီးမောင်းထိုးပြထားပြီး အမှားအမှန်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သူ့ရဲ့အချက်အလက် အစစ်အမှန်တွေကို အချိန်အကြာကြီးဖုံးကွယ်ထားပြီး တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးဌာနရဲ့ လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်အဖြစ် ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Hyun Jung Hyun အဖြစ် မင်းသားကြီး(Ji Jin Hee)က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သူဟာ သူ့ရဲ့ ထူးခြားသာလွန်တဲ့ လျင်မြန်သွက်လက်မှုနဲ့ ရဲရင့်မှုကြောင့် လူသိများပြီး ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ ရှေ့နေမလေး Choi Yeon Sooနဲ့ ချစ်ကြိုက်ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဘဝဟာ သူ့အမျိုးသမီးက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအကျင့်ပျက်ခြစားမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ဖို့အတွက် လျာထားခြင်းခံလိုက်ရချိန်မှာတော့ အကုန်ပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် ရှင်သန်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးပြည်သူ့ရှေ့နေ Choi Yeon Soo အဖြစ် မင်းသမီးကြီး (Kim Hyun Joo)က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သူမဘဝ တစ်လျှောက်လုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ တရားမျှတတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့် သူမဟာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအကျင့်ပျက်ခြစားမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနရဲ့ ခေါင်းဆောင်ရာထူးကို လျာထားခြင်းခံရပါတယ်။
သူမရဲ့ရာထူးအသစ်ဟာ ထိန့်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့သူမခင်ပွန်းရဲ့အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ဖို့ တွန်းအားပေးလာတဲ့အခါ အချစ်နဲ့ တရားမျှတမှုကြား သူမဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို JTBC ရုပ်သံလိုင်းမှ အပတ်စဉ်သောကြာနေ့နဲ့ စနေနေ့တွေမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့ GC ပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်။
Translated by Aye Thizar Moe,Hnin Aye Nyein and Thae
Original title 언더커버
MarisolSeptember 3, 2021Reply
the greatest I’ve came upon so far. However, what concerning the conclusion? Are you certain concerning the source?
Here is my page – asmr off
DonSeptember 2, 2021Reply
else may anybody get that kind of info in such an ideal
manner of writing? I’veapresentation subsequent week, and I am
Also visit my site: are scoliosis surgery
LucilleSeptember 1, 2021Reply
Also visit my website; asmr with (j.mp)
LucienneSeptember 1, 2021Reply
wide web and on world-wide-web I found quest bars this (bit.ly) web page asafinest web site
JeannetteAugust 28, 2021Reply
Here is my web page – web hosting the
Victor KhaiMay 11, 2021Reply
렌서우May 10, 2021Reply
အပိုင်း ၆မရသေးဘူးလား မင်မင်🥺🥺🥺
thazinApril 27, 2021Reply
MSSApril 26, 2021Reply
VICTOR KHAIApril 25, 2021Reply
ကျနော်လည်းမျော်နေတာ ကြာပြီ 😓😭😭
Ei terApril 25, 2021Reply
A NyoApril 25, 2021Reply
စာဖိုင် မထွက်သေးတာပါ ထွက်တာနဲံ တင်ပေးမှာပါ
Nga Loe Ma Min Aung HlaingApril 24, 2021Reply
Where episode 1?
SSApril 24, 2021Reply
Aung Bo ThweApril 24, 2021Reply
အပိုင်း ၁ မရသေးဘူးလား မင်မင်
MKSApril 24, 2021Reply
Tribes of Europa (2021- )